ဓမ္မပူဇာ အစီအစဉ်များ: ပထမအကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲ
ဘားလမ်း အထက်ဆုံးလမ်း တွင် ကျင်းပမည့် ပထမအကြိမ်မြောက် တရားပွဲ
၂ . ၄ . ၂၀၁၀ နေ့သောကြာနေ့တွင် တောင်စွန်းဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝိရိယ
၃ . ၄ . ၂၀၁၀ နေ့စနေနေ့တွင် အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒွမ္မကိတ္တိသာရ
၄ . ၄ . ၂၀၁၀ နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ယောဆရာတော် အရှင် သိရိန္ဒာဘိဝံသ
တရားပွဲကျင်းပမည့်နေရာ ။ ။ ဘားလမ်း ( အထက်ဆုံးလမ်း ) ကျောက်တံတားမြို့ နယ်...
Posted by ကျနော်ဝေယျာဝစ္စ သမား at 3/31/2010 09:31:00 AM
at 3/31/2010 09:31:00 AM